Qorshihii Kristdemokraterna oo si weyn looga soo horjeestay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qorshihii Kristdemokraterna oo si weyn looga soo horjeestay
Qorshihii Kristdemokraterna oo si weyn looga soo horjeestay. Foto: Jessica Gow/Sverge Radio
Haayadda badbaadada carruurta ee Rädda barnen ayaa si weyn uga soo horjeedsatay qorshaha xisbiga Kristdemokraterna ee siyaasadda soogalootiga. Elisabeth Dahlin oo ah xoghayaha guud ee haayadda badbaadada carruurta ayaa sheegtay in siyaasadda xisbiga Kristdemokraterna ay tahay mid ka hor imanaysa arrimaha isdhexgalka bulshada iyo waliba in ay tahay mid aan u tudhayn carruurta.
- Waxa noo muuqata in aanu qorshahani guud ahaan ba il naxariis leh ku eegin carruurta. Saddex sanno waa wakhti dheer, marka loo eego ilmaha noloshiisa. Ilmahaasi oo aan garanayn in uu waddanka ku sii noolaan doono iyo in isaga iyo waalidkiisaba dib loogu celin doono waddankii ay waalidkiisu ka yimaaddeen. Waa arrin welwel leh, mana aha wax fiican
Taasi waxa ay ahayd Elisabeth Dahlin oo ah xoghayaha guud ee haayadda badbaadada carruurta ee Rädda barnen.
Qorshahan uu soo bandhigay xisbiga Kristdemokraterna ayaa dhigaya in qofka qaxoontiga ah la siiyo saddex sanno oo deganaansho ah, halka maanta uu sharciga Iswiidhan dhigayo in qofka qaxoontiga ah la siiyo deganaansho rasmi ah (uppehållstillstånd ). Qodobkan ayaa ka mid ah dhawr qodob oo uu hoggaamiyaha xisbiga Kristdemokraterna Göran Hägglund ku sheegay in lagu dhimayo miisaaniyadda ku baxda qaabilaadda magangalyodoonka. Madelaine Seidlitz oo ah sharci-yaqaan ka hawlgasha haayadda Amnesty ee magaalada Stockholm ayaa si adag u dhaliishay fikraddii uu hoggaamiyaha xisbiga Kristdemokraterna Göran Hägglund ku daabacay jarriiradda Dagens Nyheter.
- Guud ma aragno wax ilaalinaya xuquuqda qaxoontiga, inkasta oo uu sheegay in uu raadinayo sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda soogalootiga, haddana waxaad mooddaa in uu taasi baal marsan yahay. Madelaine Seidlitz oo ah sharci-yaqaan ka hawlgasha haayadda xuquuqda aadamaha ee Amnesty ee magaalada Stockholm.
Xisbiga Kristdemokraterna waxa kale oo uu doonayaa in la dedejiyo hannaanka loo maamulo dacwaddaha dadka qaxoontiga ah ee ka yimid waddamada lagu tiriyo in ay xaaladdooda ammaanku deggan tahay. Madelaine Seidlitz ayaa mar kale u aragta in fikirkani aanu ahay mid sharci ah.
- Marka uu Göran Hägglund tusaale u soo qaatay Balkan ama qayb ka mid ah Balkan, waxa ay taasi xaqiiqdii ka dhigan tahay in sidoo kale laga hadlayo dadka loo yaqaano roomarka. Tusaale ahaan kuwa ka yimid waddanka Serbiya kuwaasi oo la kulma dhibaato dhanka cusuriyaynta ah. In dadkani oo kale la yidhaa magangalyo lama siinayo waxa aan u arkaa in ay tahay mid qaldan.
Taasi waxa ay ahayd Madelaine Seidlitz oo ah sharci-yaqaan ka hawlgasha haayadda xuquuqda aadamaha ee Amnesty ee magaalada Stockholm.
George Joseph waa masuulka arrimaha qaxoontiga u qaabilsan Ururka kaatoliga ah ee caawimada ee magaciisa la yidhaa Caritas. George waxa uu aaminsan yahay in qorshahan uu wato xisbiga Kristdemokraterna uu noqon doono mid kharash badan ku kaca, maaaddaama oo qaxoontiga Siiriya ka yimaaddaa ku qasbanaan doonaan in ay haddana mar labaad magangalyo dalbadaan maaddaama oo aannu waddankoodu ammaan ahayn.
- Waxa ay ku kici doontaa kharash badan, ha noqoto dhanka isdhexgalka iyo waliba dhanka maamulka arrimaha bulshada.
Goerge ayaa sidoo kale aaminsan in qorshahani yahay mid qaldan.
- Waddanku marka uu sumcad leeyahay waa in uu garab istaago dadka tabaalaysan. Maaha in aynu xisaabino lacagta aynu siino dadka magangalyada u baahan. Arrintu waxa ay tahay sidii naf loo badbaadin lahaa.
torsdag 18 december 2014 kl 13.42